Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana Eoropeana » Misokatra ny WTM London: Manafaka sa Mampatahotra?
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • fanorenana • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK
Misokatra ny World Travel Market; mivory any Londres ny World of Tourism – ary fihaonana mahafaly izany hatreto.
Araka ny tombantombana navoakan'ny World Travel Market (WTM), dia nanamafy ny fampirantiana avy amin'ny firenena maherin'ny 100, miaraka amin'ireo mpividy avy amin'ny firenena sy faritra 141 amin'ny fampisehoana ara-barotra mitohy any Londres (1-3 Novambra).
Roa herinandro lasa izay, ny World Tourism Network dia niangavy an'i Reed, mpikarakara ny WTM London, handidy ny saron-tava.
Ny World Travel Market dia nampanantena fiarovana ho an'ny mpandray anjara rehetra no laharam-pahamehana indrindra.
Roa herinandro lasa izay, hoy i WTN eTurboNews ary navoaka tao amin'ny tranokalany hoe: "Manoro hevitra mafy izahay mba hanao saron-tava ianao rehefa any amin'ny efitrano anatiny miaraka amin'ny olona tsy hifangaro amin'ny mahazatra."
Ny World Tourism Network dia nanentana ny WTM herinandro lasa izay mba handroso bebe kokoa ary handidy ny fanaovana saron-tava ho an'ny rehetra.
Androany, ny varavarana ao amin'ny Excel Exhibition Center any London dia nisokatra tamin'ny 10:00 maraina tamin'ny 1 Novambra ho an'ny Ny tontolon'ny fizahantany dia hiara-hivory, hifandray tanana indray, ary hifamihina.
Tena ambany ny fangatahana saron-tava, ary saika ny rehetra miasa na manatrika ny toerana, anisan'izany ny mpiasan'ny trano fisakafoanana, dia tsy nanandrana nanao saron-tava.
Ny 1 novambra ihany koa no andro nametrahan'ny governemanta anglisy ny fepetra takian'ny governemanta anglisy, mampihomehy amin'ny andro iray izay nilazan'ny tatitra hafa fa saika tsy misy intsony ny fandriana fikarakarana marary ary miakatra ny isa COVID-19.
Ny tranga, ny tranga mavitrika, ny hopitaly ary ny taham-pahafatesana dia miakatra any UK, saingy misokatra ny toerana misy hetsika toa an'i Excel, trano fisotroana ary klioba alina ary mahatsiaro ho afaka ny olona.
Io fahatsapana manafaka io no nitranga tao amin'ny World Travel Market any London androany. Fianakaviana lehibe ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany, ary nahita ranomaso ianao, ary niverina ny fikasihan'olombelona rehefa nihaona indray ny mpinamana taloha taorian'ny fameperana COVID 2 taona.
Ny WTM dia nanamarina ny firaketana momba ny vaksiny ho an'ny olona rehetra miditra amin'ny foibe fampirantiana, saingy ampy ve izany? Ny ankamaroan'ny hopitaly vaovao dia toa olona vita vaksiny tanteraka.
Mangina kokoa ny tsenan'ny Travel World, betsaka kokoa ny toerana malalaka sy toerana hipetrahana, ary na dia feno hipoka aza rehefa milahatra hisotro kafe, midika izany fa afaka niparitaka tao amin'ny efitrano fampirantiana ny mpandray anjara.
Staff - tsy misy saron-tava
Hon. Edmund Bartlett miomana amin'ny tafatafa amin'ny CNN Richard Quest
Tsy mandeha ny mpanadio tanana Costa Coffee
Fihaonambe mpanao gazety any Thailandy
Kely kokoa ny endrika fijoroana, saingy tsy niova firy ny elanelana teo amin'ny fijoroana. Tsikaritra fa mihavitsy ny fampirantiana sy ny mpitsidika manatrika. Mazava ho azy fa nampiseho hery i Arabia Saodita tamin'ny fanehoana fijoroana manaitra teo amin'ny Pavillion. Arabia Saodita no mpiara-miombon'antoka ofisialy amin'ny WTM.
Raha afaka mampiseho ny WTN ao anatin'ny tapa-bolana, tsy misy tranga vaovao nipoitra avy amin'ny tsy misy saron-tava, tsy misy politikam-piaraha-monina, dia midika toko vaovao ho an'ny hetsika ho avy any Grande-Bretagne izany ary natsangana ny fivoriana sy ny indostrian'ny fanentanana any an-kafa.
eTurboNews dia hampiseho at IMEX Amerika, ny Fihaonana sy ny Fandrisihana ara-barotra ao Las Vegas 8-11 Novambra.
eTurboNews dia an mpiara-miasa amin'ny haino aman-jery ofisialy ho an'ny World Travel Market London.